Harry Potter: Wizards Unite Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဟယ်ရီပေါ်တာ: Wizards စည်းလုံးစေ
ဟယ်ရီပေါ်တာ: Wizards စည်းလုံးစေ APK ကို
ပိုကီမွန် GO, ဟယ်ရီပေါ်တာ၏ထုတ်လုပ်သူမှ: Wizards ယူနိုက်တက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအဖြစ်မှန် (AR) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကစားသမားများ၏လက်၌ပဉ္စလက်ကိုထည့်လေ့မရှိသော Wizard ကမ္ဘာ့ဖလားအားဖြင့်မှုတ်သွင်းဂိမ်းလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ: Wizards စည်းလုံးစေ JK Rowling ရဲ့မူလပုံပြင်များအရပျကိုကစားသမားအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအသစ်က Wizard ကမ္ဘာ့ဖလားမိုဘိုင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းဖန်တီးဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့တံဆိပ်, Portkey ဂိမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပူးတွဲတီထွင်ခြင်းနှင့် Niantic, Inc နှင့် WB အားကစားပြိုင်ပွဲဆန်ဖရန်စစ္စကိုကပူးတွဲထုတ်ဝေဖြစ်ပါသည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှု၏ဗဟိုမှာ။
သင့်ရဲ့ Wizard နိုင်သည့်အလားအလာ, နားလည်သဘောပေါက်
တစ်ဦးကဘေးဆိုး Foundables-မှော် artefacts, သတ္တဝါတွေ, လူတွေ, ပင်အမှတ်တရများမှထူးထူးဆန်းဆန်းအဆိုပါ Muggle ကမ္ဘာကြီး၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, Wizard ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လေသိရသည်။ လျှို့ဝှက် Task Force ၏ညတျတရား၏အသစ်တစ်ခုကလေးစစ်သားတအဖြစ်, သငျသညျဘေးဆိုး၏နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့် Muggle မျက်စိကနေဘေးကင်းလုံခြုံမှော်စောင့်ရှောက်ဖို့ကမ္ဘာအနှံ့ကနေစုန်းနှင့် wizards တွေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
The Magic အားလုံးကိုသင်ခန့် Is
သငျသညျပွငျပခြေလှမ်းနှင့်ကမ္ဘာစူးစမ်းသကဲ့သို့, မြေပုံ Foundables ၏တည်နေရာညွှန်ပြကြောင်းမှော်၏သဲလွန်စဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားသဲလွန်စအမျိုးမျိုးသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတည်နေရာမှာတွေ့ရတဲ့နှင့်အပြည့်အဝ3ဒီဂရီအဆင့်မြင့် AR အတွက်ကြွယ်ဝစွာအသေးစိတ် 360D တွေ့ဆုံဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ သငျသညျလုံခြုံစွာ Wizard ကမ္ဘာကသူတို့ကိုပြန်လာနိုင်ရန်အတွက် Foundables ဝန်းကျင် confounding မှော်အနိုင်ယူဖို့စာလုံးပေါင်းအမျိုးမျိုးကိုနှင်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနစာလုံးပေါင်း replenish ကြောင်း Inns, ဆေးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဝေးအထင်ကရ Wizard ကမ္ဘာကြီးတည်နေရာရန်သင့်အား whisk နိုင်သည်ကိုပင် Portkeys အပါအဝင်သင့်ရဲ့ခရီးပေါ်တွင်သင်ကူညီကြလိမ့်မည်သည့်အခြားအရာများအတွက်မျက်စိထုတ်ထားပါ။
အန္တရာယ်များရန်သူများဆန့်ကျင်ပင်ပိုကြီးမှော်ထိုကဲ့သို့သော Wizard စိန်ခေါ်မှုများအဖြစ် Feat, Real-time သမဝါယမ multiplayer တိုက်ပွဲများအပေါ်ယူသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစုဝေးစေ။ ခိုင်မာခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကျော်လွှားပြီးအလွန်ရှားပါးတဲ့ Foundables ရှာဖွေတွေ့ရှိ, သငျသညျထကျအဖွဲ့နှင့်သင်၏အပေါင်းအဘော်ကိုစုန်းနှင့် wizards တွေ strategize နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမှော်အမည်ခံ-Auror, Magizoologist အတွက်အထူးပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, တိုင်းလာသည်ဟုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ရှိပါမောက္ခ-ဖို့ နေရာလေးကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်။
အဆင်သင့်သင့်ရဲ့ Wand, သင်၏မိတ်ဆွေများသတိပေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘေးဆိုးများမှ Wizard ကမ္ဘာကြီးကိုကာကွယ်ပေးရန်အဆင်သင့်ရှိစေသတည်း။ သင့်ရဲ့ Wizard စွန့်စားမှုစောင့်ကြို!
- ကုန်သည်ကြီးများအသင်း screen ပေါ်မှာစွမ်းအင်စာလုံးပေါင်း
- နယူး Registry ကို 's Page!
- XP ကိုဆုလာဘ်ကုန်သည်များ 1-8 အတွက်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်ကုန်သည်များ 11 + အတွက်တိုးလာ
- က Settings ထဲမှာပြောင်းလဲမှု Code ကိုအမည်! သငျသညျကွိမျသာဒီလုပျနိုငျ
- မြေပုံ HUD အပေါ်စွမ်းအင်စာလုံးပေါင်း
- Exstimulo ဆေးတိုက်ခိုက်ရေးတွင်ပိုမိုထိရောက်
- နယူးမှန်ဘီလူး, Frame က & စတစ်ကာများ!
74.71 ကို MB
Peronio Pop-up စာအုပ်
အဆိုပါ Park မှာငါးမန်း
တစ်ကိုယ်တော်စန္ဒရား - ...